Sida loo isticmaalo geesinimada iyo farriimaha WhatsApp ee iPhone | Wararka IPhone
Sida loogu isticmaalo geesinimada iyo farta WhatsApp-ka iPhone
Waxaan horeyba kuugu sheegnay shalay in cusbooneysiinta khayaanada iyo khiyaanada WhatsApp ay urinayso inta udhaxeysa mid caadi ah iyo mid xun. Caadi ahaan waa inaan soo laabano maalmo kadib si aan kuugu sheegno wararka dhabta ah ee kooxda horumarinta ee WhatsApp Inc ay ku adkeysanayaan inay dhuuntaan, laakiin midna nagama seegno sidaad sifiican u ogtahay, iyo inbadan oo ka mid ah "hagaajinta cilladaha" ay ka mid yihiin, dheeraad ah ayaan raadin doonaa. Duhurnimadii shalay ayaa saaxiibkay ila yaabay sheeko xiise leh oo ku jirta WhatsApp ee iOS, hadda waxaan ku qori karnaa qoraal geesinimo, ka gudubtay iyo italic. Waxaan kuu sharxeynaa sida aad ugu sameyn kartid wax ka beddelka qoraalkaas adiguba iPhone-kaaga sida ugu fudud.
Runtu waxay tahay inay ka fudud tahay sida aan qiyaasi karno, si kastaba ha noqotee, waa xoogaa qaab cufan oo wax looga beddelayo qoraalka, laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inay shaqeyso, waana ku mahadsan tahay tan waxaan xoog badan ku xoojin karnaa qoraalka qoraalka, taas oo inaga badbaadin doonta inta badan cinwaannada jahwareerka leh weedho ama xoogga saaraya qodobada qaarkood. In kasta oo si daacadnimo ah, hawsha "iskutallaabidda" anigu uma arko wax ka badan oo la isticmaalo marka loo eego in aan xoogaa saaxiibbadeen ku dhufto
Sidaa darteed, sida aad ku aragtay sawirka, si aan u dhaafno qoraalka waa inaan galno astaamaha "~" qoraalka ka hor iyo ka dib, si geesinnimo leh wax loogu qoro waa inaan galno astaanta "*" ka hor iyo ka dib qoraalka aan dooneyno ku muuji si geesinimo leh uguna dambayn si aad ugu qorto farta waxaan isticmaali doonaa "_".
Hagaag, shaqooyinka faaiidada leh meesha ay ka jiraan, dhanka kale waxaan sugeynaa WhatsApp si loogu daro mashiinka raadinta sawirka wada hadalka, kordhinta sida Telegram iyo awooda lagu raadinayo GIF kaliya adigoo garaacaya "@gif" ama istiikarada qaaska ah. Laakiin WhatsApp waxay umuuqataa inaysan waligeed halkaa gaarin, xaqiiqda, inkasta oo hada aan dhaafi karno PDF-yada, wali kuma dhicin inay .doc-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Sida loogu isticmaalo geesinimada iyo farta WhatsApp-ka iPhone
Way iga nixisaa markasta oo aan "Bug Fixed" galiyo cusbooneysiinta. Waa maxay waalan beenta.
Waxaan hayaa war kale oo aad u xiiso badan oo aan sii dayn doono caawa ama berri ^^
Warka na sii
Teleefankayga iphone 6S waxaan ku arkaa isbadaladan, laakiin qofka qaata wuxuu u arkaa siduu yahay, calaamadaha kahor iyo kadibba (waxay leeyihiin iphone 5S)
maxaa tan ah?
Waa inaad cusboonaysiisaa whatsapp si ay u soo baxdo, hadaadan samayn waad arki doontaa sida ay tahay ...
Qoraalkuna sidoo kale ma uga muuqan lahaa geesinimo / farta dadka isticmaala android ama sidee u socotaa?
Ku jawaab Odalie
Apple waxay ku darsatay magaalooyin badan Flyover; ballaaran "Ku dhow" dalal badan